Chelsea Oo Barbarro Niyad-jab Ah La Gashay Brighton & Fursad Ay Kaalinta 3aad Ku Geli Lahayd Oo Ay Iska Lumisay - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaChelsea Oo Barbarro Niyad-jab Ah La Gashay Brighton & Fursad Ay Kaalinta 3aad Ku Geli Lahayd Oo Ay Iska Lumisay
Chelsea Oo Barbarro Niyad-jab Ah La Gashay Brighton & Fursad Ay Kaalinta 3aad Ku Geli Lahayd Oo Ay Iska Lumisay
Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa barbarro niyad-jab ah la gashay Brighton oo marti ugu ahayd garoonka Stamford Bridge, kulan qas hadheeyey oo taageereyaal iskugu soo baxeen barxadda garoonka, taas oo keentay in dib loo dhigo waqtigii ciyaarta.
Chelsea oo haddii ay guuleysan lahayd ku fadhiisan lahayd kaalinta saddexaad ee horyaalka Premier League, hal dhibicna ka sare mari lahayd Leicester City ayaa awoodi weyday in ay jabiso difaaca Brighton oo si aad ah u diyaarsanaa, waxaanu kulankoodu kusoo dhamaaday barbarro goolal la’aan ah.
Tababare Thomas Tuchel ayay kooxdiisu maamulaysay inta badan ciyaarta, waxaase kulanka aan ka dhicin haliso badan oo labada dhinac ba ah, inkasta oo ay haddana jireen fursado goolal lagu dhalin karayo.
Kulankan oo uu Tuchel isbeddello dhawr ah ku sameeyey safkii uu kaga guuleystay Manchester City usbuucan horraantiisii ee ay ugu gudbeen Finalka FA Cup ayaa waxa dhibicda ay heleen ay kula sinmeen West Ham United oo ay yeesheen min 55 dhibcood, taas oo ay farqiga goolasha kagala baxeen booska kaalinta afraad.
Ciyaartan oo ay ahayd in ay bilaabanto 10kii fiidnimo ee waqtiga Geeska Afrika ayaa waxay dib u dhacday 15 daqiiqadood kaddib taageereyaal bannaanka iskugu soo baxay oo dhexda gashaday Petr Cech, isla markaana si cidhiidhi ah uu kaga soo baxsaday.
Mudaharaadka oo markii hore ku bilaabmay qaab ay taageereyaashu cadhaysan yihiin, kana soo horjeedaan in kooxdoodu ka mid tahay naadiyada tartanka Super League, ayaa markii ay ogaadeen in ay Chelsea iskaga baxday tartankaas waxay garoonka bannaankiisa ku muujiyeen farxad, waxaana codka go’aanka ay afkiisa ka qaadeen Cech oo dhexda ugu jiray.
Natiijada ay ciyaartani kusoo dhamaatay, waxa Chelsea laba dhibcood kaga sarraysaa Liverpool oo kaalinta lixaad ku jirta iyo West Ham oo ay isku mid yihiin dhibcaha balse farqiga goolasha ka yar.
Leicester City oo saddexaad ku jirta, hal dhibicna ka sarraysa Chelsea iyo West Ham ayaa habeen dambe ciyaaraysa, waxaana haddii ay guul-darro la kulmaan ay u noqon doontaa in ay halis ku gelayaan in booskooda ay lumiyaan.